बाँकेको नरैनापुर कसरी बन्दै छ कोरोना संक्रमणको 'हटस्पट' ?
बाँकेको नरैनापुर कसरी बन्दै छ कोरोना संक्रमणको 'हटस्पट' ? 'चेतनाको कमी छ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्दासमेत भत्ता माग्छन्'
विकाश पराजुली बुटवल, १० वैशाख
प्रदेश-५ को विकट विकट गाउँ मानिने बाँकेको नरैनापुर अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को हटस्पट बनेको छ । प्रदेश-५ मा २ सय ४३ जना संक्रमित भेटिइँदा यहि गाउँपालिकामा मात्र ८७ जना रहेका छन् ।
बाँकेमा शनिबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार १ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जसमध्ये २१ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् भने १ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने नरैनापुरकै क्वारेन्टाइनमा रहेका एक पुरुष हुन् ।
कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको नरैनापुर गरिबी, चेतनाको कमीकै कारण आधारभूतरूपमा विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । ६ वटा वडा रहेको नरैनापुर गाउँपालिकाका सबै वडा भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । सबै सीमा खुल्ला भएका कारण अहिले पनि यहाँ भारतबाट नेपालमा नागरिक आउने क्रम राकिएको छैन । जसका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
लकडाउन भएपछि नेपाल भित्रिने क्रम झन बढी छ । सुरुवाती समयमा लुकीछिपी प्रवेश गरेका भए पनि अहिले सीमावर्ती क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मीकै रोहबरमा नेपाल ल्याइ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ । अझै पनि नरैनापुरका १ हजारभन्दा बढी भारतमा रहेकाले उनीहरू यहि बेलामा नेपाल आउन सक्ने आँकलन गाउँपालिकाको छ ।
अहिले नरैनापुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा दिइरहेका छन् । गाउँपालिकाले १५ वटा क्वारेन्टाइन बनाएर भारतबाट आएकाहरूलाई राख्दै आएको छ ।
भारतबाट नेपाल आउने क्रम नरोकिएका कारण अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउँछन् । मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको नरैनापुर गाउँपालिकामा चेतना वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजना बनाएको भए पनि समुदायमा सचेतना बढ्न सकेको छैन । चेतनाकै अभावका कारण कोरोना संक्रमितलाई नेपालगञ्ज लैजानसमेत उनीहरूले दिएका थिएनन् ।
'अवस्था थप जटिल बन्ने अवस्था छ । यसमा प्रदेश सरकारले अली बढी चासो दिनुपर्ने हो' नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले भने । उनले गाउँका नागरिकले लकडाउनको पालना गर्न र क्वारेन्टाइनमा बस्नु आफ्ना लागि नभई सरकारकै लागि हो भन्ने बुझ्दा अवस्था सुधार हुन नसकेको बताए ।
'चेतनाको धेरै कमी छ । क्वारेन्टाइन र संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्दासमेत भत्ता दिनुपर्छ भनेर त्यहाँको नागरिकले भनेका छन्' उनले भने, 'समुदायमा चेतना नहुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेकासँग गाउँका मानिसहरू सँगै बस्ने, खाना ल्याइदिने, कपडा ल्याइदिने गरेका छन् । यसले जोखिम झनै बढेको छ ।'
अहिले नरैनापुरका क्वारेन्टाइनमा ६ सय ७० जना रहेको र त्यसमध्ये ६३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्न बाँकी रहेको नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मईम खाँले जानाकारी दिए । अहिले पनि सीमाबाट नेपाली आउने क्रम रहेकाले यो संख्या बढ्ने उनले बताए । उनका अनुसार आज मात्र नरैनापुरमा २३ जना नेपाली भारतीय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बाँकेमा आइसोलेसन र भारतबाट आउने नेपालीका लागि क्वारेन्टाइनको अभाव हुन थालेको छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका कतिपय क्वारेन्टाइन भरिएका छन् भने कतिपयका क्वारेनइनमा सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । विद्यालय भवनमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनका कोठामा झ्याल, ढोकासमेत छैनन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा विद्युत र पानीको आपूर्ति पनि नभइको गुनासो आउन गरेको छ ।
जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा आवश्यक सामान्य मापदण्ड पूरा नभएको क्वारेन्टाइनमा रहेका अमरबहादुर सुनारले गुनासो गरे । राप्तिसोनारी गाउँपालिकाको केही विकट र सदरमुकामबाट ६५ किलोमिटर दूरीमा रहेको वडा नम्बर १ ले पनि २५ बेडको क्वारेन्टाईन निर्माण गरेको छ ।
निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा अतिआवश्यक वस्तु पानी, विद्युतलगायतको समस्या रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर वली स्वीकार्छन् । राप्ति सोनारी गाउँपालिकामा ५ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो । जसमा ७४ बेड थिए । अहिले भारतबाट आएका नेपालीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै विस्तारै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन फितलो बन्दै गएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, १२:१६:००
प्रदेश ५ मा रोल्पा बाहेक ११ जिल्लामा कोरोना फैलियो
प्रदेश ५ मा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइँदै
प्रदेश ५ मा २५ जना संक्रमित निको भएर घर फिर्ता
लकडाउन मोडालिटीबारे विज्ञसँग प्रधानमन्त्रीले थाले परामर्श